Kungani WZRODS
Okwangempela Futhi Ochwepheshe, Amakhasimende avamile angaphezu kuka-200 avumelana nalokhu eminyakeni engu-16 edlule.
Yasungulwa ngo-2005 njengomkhiqizi futhi igxile kakhulu esigxotsheni se-carbon composite.Owokuqala ukusebenzisa inhlanganisela yekhabhoni ukwenza isigxobo sesibhengezo esindizayo, uthole amalungelo obunikazi ayi-10 eShayina.
Imikhiqizo Emisha Njalo Unyaka, umenzi Ojwayelekile Wegolide wezigxobo ze-beachflag nezisekelo.
Umnyango wethu we-R&D wethula imikhiqizo emisha njalo ngonyaka.Izinto ezikhethekile nezimangalisayo zizokwenza uqhudelane kakhulu emakethe yakho.Noma yimuphi umqondo owenziwe ngendlela oyifisayo ungenzeka.
Uhlelo Oluqinile Lokulawula Ikhwalithi, Iwaranti yeminyaka emithathu yezigxobo.
Inqubo ngayinye izohlolwa futhi ihlolwe.Sonke isisebenzi siyi-QC ngesikhathi sokukhiqiza, ukungabaza ngakunye kuzobikwa.Ukuhlolwa kwekhwalithi okungu-100% kuzokwenziwa ngaphambi kokupakisha nokulethwa.
Ukusebenza Okuphezulu, ama-12000pcs ake aqedwa phakathi nezinsuku eziyi-15.
Ukukhiqizwa kwanyanga zonke kungafinyelela kumasethi angu-40,000.Amasethi angu-1000 angathunyelwa ngokushesha ngezinsuku ezingu-7.
i-hardware passI-European REACHfuthiI-USA CP65ejwayelekile.
ILab Test Ikhwalithi Yegolide
Izigxobo azinawo umonakalo omncane ngaphansihamba u-160km/h ngemuva kwesikhathi esi-3ukuhlolwa kwe-ltalian Wind Tunnel Lab.
Ikhwalithi ingaphezu kwewaranti yeminyaka emi-3 esiyithembisayo
Isevisi ye-warehouse yase-USA kanye ne-EU iqinisekisa ukuthunyelwa okusheshayo kanye nezindleko eziphansi zempahla.
Ulayini wokukhiqiza uphasise i-Environmental lmpact Assement,
Iphasi LenkampaniI-Ethical Auditkanye neLungu leI-Sedex